Xeebaha iyo xeebta Mijas | Wararka Safarka
Maria Jose Roldan | | Malaga, Xeebaha
Haddii aad ka mid tahay dadka jecel xagaaga inay u yimaadaan inay ku raaxaystaan ​​xeebaha, maqaalkani wuu ku soo jiidan doonaa adiga. Xeerar aan la tirin karin ayaa ka jira dalkeenna iyo adduunka oo dhan, iyo sidoo kale coves qurux badan, laakiin maanta waxaan rabaa inaan kaala hadlo kuwa si gaar ah ugu jira Mijas. Xaqiiqdii muhiim maahan oo kaliya in la ogaado barafka iyo xeebaha xagaaga, jiilaalka ama wakhti kale oo sanadka ka mid ah, sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la booqdo ama lug lagu aado si loo raaxeysto dabeecadda.
Laakiin haddii aad xiiseyneyso inaad booqato Mijas oo aad jidka ku garatid waa kuwee xeebaheeda iyo kuwa ugu fiican, ka dib sii wad akhriska maxaa yeelay waxaad ogaan doontaa xaafado ka mid ah magaaladan, inay ku heli doonaan. Muhiimna maaha inaad u gudubto dunida kale si aad ugu raaxaysato meelaha cajiibka ah, Spain sidoo kale waxay leedahay soo jiidasho badan oo Mujas ayaa ku tusi doona.
1 Mijas: waa meel dalxiis oo aad u wanaagsan
3 Xeebta Dayaxa
4 Xeebta El Bombo
6 Xeebta Almirante
7 Xeebta Doña lola
8 Xeebo badan oo aadan seegi karin
Mijas: waa meel dalxiis oo aad u wanaagsan
Laga soo bilaabo dhowr sano ka hor illaa maanta waxaan dhihi karnaa Mijas wuxuu noqday mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan dalxiis ee Andalus. Ma jiro nin reer Andalus ah oo aan aqoon meesha Mijas ku yaal, oo xitaa waxaa jira dad badan oo ka yimid dibedda si ay ugu raaxaystaan ​​xeebaheeda, coves, gaaskeeda iyo daaweynta wanaagsan ee dadka.
Mijas ma leh wax ka yar 12 kilomitir oo xeeb ah waxaana ka buuxa bakhaarro iyo xeebo dhadhan walba leh. marka waxaan hubaa inaad awoodi doonto inaad hesho geeska kuugu fiican adiga, iyadoon loo eegin waxa dhadhankaaga shakhsi ahaaneed ama doorbidkaagu yahay. Ku dhowaad dhammaan xeebaha Mijas waxay leeyihiin adeegyo aasaasi ah si ay u awoodaan inay maalin aan caadi aheyn la qaataan qoyskooda iyo saaxiibadood.
Haddii aad ka fekereyso inaad ku raaxeysatid fasax qurux badan Costa del Sol, markaa waa inaadan iska lumin fursadda aad ugu dhowaan lahayd Mijas iyo inaad ku raaxeysan karto wax kasta oo aad adiga ku sugaysay. Ha seegin hoosta qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee caanka ah iyo xeebaha si aad uga dhigato safar wanaagsan oo aad ku raaxeysato.
La Cala de Mijas waa kan ugu caansan dhammaan wuxuuna ku yaal si sax ah magaalada ay ka hesho isla magaca. Hareeraheeda waxaa ku yaal baarar iyo maqaayado badan maxaa yeelay waa goob dalxiis aad u wanaagsan oo had iyo jeer ay ka buuxaan dad, ka dhigaysa mid ku habboon ganacsiga. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, xeebta aaggan waxaa lagu abaalmariyaa Calanka Buluugga ah ee Bulshada Yurub si aad u hesho fikrad ah quruxda goobta iyo xaaladaha wanaagsan ee ciiddeeda iyo biyaheedaba.
Xeebtaan waxay ku taal Calahonda, waa xeeb ka duwan dhammaan dadka kale. Waxay leedahay ciid mugdi ah taasna waxay noqon doontaa waxa kugu soo jiito dareenkaaga. Laakiin Waa xeeb aad u wanaagsan inaad maalin la qaadato qoys, saaxiibbo ama keligaa. Waxa kale oo ay leedahay calan buluug ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tirada badan ee adeegyada ee la heli karo si ay maalintaada xeebta uga dhigto mid gaar ah oo aanad waxba ka maqnaan.
Xeebta El Bombo
Cala de Mijas waxaad sidoo kale ka heli kartaa El Bombo Beach, xeeb caan ah in kastoo aan si fiican loogu aqoon dadka kale. Waxay leedahay afar makhaayadood oo u dhow xeebta oo haddii aad illowdo tuwaalkaaga ama kursiga sariirta, waxaad sidoo kale ka heli kartaa halkaas si aad u kireysato dalladda ama kursiga dookha ah ee aad dooratay. Waa hab aan looga qaadan karin hoyga iyo dalladaha guriga. In kasta oo xilli sare aad halis u tahay in markii aad timaaddo wax walba la qaato oo aad u baahato inaad guriga aado si aad u hesho ama aado dukaanka oo aad u iibsato waxaad xeebta ugu baahan tahay.
Waa xeeb aad ka heli karto guryo badan oo kiro ah si aad u joogtid. Waa fikrad aad u fiican in xagaaga lagu qaato xeebta oo waliba maalin waliba xeebtu aad u dhowdahay. Haa runtii, Sii sii ballanso maxaa yeelay guryuhu way buuxaan xilli sare, kharashkuna xoogaa wuu sarayn karaa.
Xeebta El Almirante sidoo kale waxay ku taal Calahonda sidoo kalena waa xeeb ciid ah oo mugdi ah. Waa xeeb lagu raaxeysto hawada cusub, badda iyo aragtiyo wanaagsan. Shaki la'aan waxay noqon doontaa meel aad ku nasato oo aad ku nasato. Waxaad sidoo kale heli doontaa adeegyo aad maalintaada kaamil ka dhigto.
Xeebta Doña lola
Xeebtaan waxay aad ugu egtahay tii hore xagga adeegyada waxayna caan ku tahay dadka ku nool magaaladan. Sababtaas darteed, haddii aad rabto inaad u hesho, wax dhibaato ah kuma lahaan doontid.
Xeebo badan oo aadan seegi karin
Kuwan aan kor kuugu magacaabay waa xeebo aadan ku waayi karin Mijas, laakiin haddii aad sidoo kale rabto inaad safar wanaagsan ku tagto meelaha waaweyn iyo xeebta Mijas, markaa ha seegin liistada soo socota si loogu daro safarkaaga iyo sidaa darteed ku raaxee xeebta oo dhan. Ha lumin faahfaahin!
Xeebta Riviera. Waa xeebta ugu dheer xeebta Mijas oo dhan.
Xeebta Cabo Rocoso. Way yara cidhiidhsan tahay laakiin waa ku habboon tahay inaad saaxiibbada kula raaxaysatid.
Xeebta Las Doradas ee Cala de Mijas
Playa del Chaparral, oo kuyaala inta udhaxeysa Cala de Mijas iyo El Faro.
Xeebta Iftiinka Calaburras
Xeebta El Ejido
Mid kasta oo ka mid ah xeebaha aan ku soo sheegay maqaalkani waa mid ku habboon in lala raaxeysto qoyska, asxaabta ama haddii aad rabto inaad keli tagto si aad maalin ugu raaxaysato xeebta. Laakiin xeebaha oo dhan waxay leeyihiin adeegyo wanaagsan, waa kuwo waasac ah oo aad loo heli karo sidaa darteed wax dhibaato ah kala kulmi maysid inta badan baabuurkaaga. Miyaad horeyba u ogeyd midka aad rabto inaad u tagto si aad ugu raaxaysato xagaagaaga ama si fudud aad u barato iyaga una ogaato quruxdooda oo dhan? Xaqiiqdii waxaad la jeclaan doontaa mid kasta iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha iyo xeebta Mijas
Dabaaldegyada masraxa ee ugu xiisaha badan xagaaga Spain
Halkee laga helaa burburkii hore?